Madaxweynaha Mareykanka oo tilmaamay dawada Corono-Virus – Banaadir Times
Madaxweynaha Mareykanka oo tilmaamay dawada Corono-Virus
By banaadir 21st March 2020 122
Mareykanka ayaa billaabay tijaabooyin ay ku eegayaan in chloroquine ay gacan ka geysan kata daweynta coronaviris
“Waxaan awoodi doonnaa in si degdeg ah daawadaas lagu helo. Waana tan ay ku wanaagsan tahay FDA. Hannaanka caddeynta ayay mareen – waa la xaqiijiyay.”
La yaab malaha in chloroquine ay qeyb ka ahayd baaritaanka la xiriira sidii lagu caawin lahaa bukaannada coronavirus.Waa dawo aad loo yaqaanno, waa raqiis soo saariddeeduna fududdahay. Marka lagu daweynayo bukaannada duumada, waxaa dawada loo adeegsadaa yareynta xumadda.Balse weli ma jirto xaqiijin ku saabsan sida ay dawadan wax uga tareyso bukaannada fayraska Corona qaba, inkastoo baaritaan uu ka socdo Shiinaha, Mareykanka iyo Spain.Ururka Caafimaadka Adduunka ayaa sidoo kale sheegay in baaritaanku uu weli socdo, balse aan loo heyn wax caddeyn ah.Baraha internet-ka ayaa loo aad looga raadiyay magaca Chloroquine toddobaadkii la soo dhaafay, sida ay muujisay xogta Google.Dawada oo aad looga iibsanayo Nigeria
Duulimaadyada Caalamiga ah ee Soomaliya oo Mudo 2 cisho ah lafasaxay.
Weerar lagu qaaday saldhig ayu ku sugnaayeen Ciidanka dowladda Soomaaliya
By banaadir 29th November 2020
Milatariga Itoobiya oo shacabka u diidaya in ay ka baxaan Magaalada Jig Jiga